Warshada saliida lagama maarmaanka ah iyo soosaarayaasha ugu fiican ee daryeelka udgoon timaha Rosemary | HaiRui
Tel: +86 18879697105
Quudin Ku dar
Shahaadooyin Iyo Maamuus
Daawada dabiiciga ah ...
Xiddiga dabiiciga ah ee fasalka cuntada ...
Saliida dabiiciga ah ee dabiiciga ah
tayo sare leh Carvacrol ...
Soosaarida dabiiciga ah ee dabiiciga ah ...
Saliida Muhiimka ah ee Udugga Daaweynta Udugga
OEM / ODM, OEM / ODM
Tirada La Heli Karo:
Saliida Muhiimka ah
Waxyaabaha ay ka kooban tahay:
sgs, MSDS, COA MSDS
qoyaan, Cadeeye, nafaqeyn
100% dabiici ah Saafi
Daaweynta Udugga Timaha Rosemary Saliida Muhiimka ah
cadarka, cusbooneysiinta, daaweynta
Baako & Gaarsiin
Cabbirka keli ah:
waxaan sameyn karnaa xirmada OEM / Customized, dhalooyinka waa muraayad amber .such sida 10ml / 15ml / 20ml / 30ml / 50ml / 100ml / 500ml / 1000ml. waxaan sameyn karnaa calaamado gaar ah iyo sanduuqa hadiyadeed ee loo habeeyay. Xirmadayada Jumlada: 1 kg foostada maqaarka Aluminium; 25kg kartoon oo ay ku jirto bac balaastik ah / 25kg / 50kg / 180kg durbaanka birta galvanized
Waqtiga Hogaaminta :
Tirada (kiilogram) 1 - 50 51 - 200 201 - 1000 > 1000
Est. Waqti (maalmo) 6 10 15 In lagu gorgortamo
Saliida udgoon ee udgoon ee cadarka rosemary 100% caraf udgoon udgoon dabiici ah saliid Saliida sanduuqa Baako
Soo saarMagaca ct
Saliida Rosemary waxaa laga soosaaraa Rosmarinus officinalis (sidoo kale loo yaqaan Rosmarinus coronarium) oo ka tirsan qoyska Labiatae waxaana sidoo kale loo yaqaanaa kicinta. Saliidaan muhiimka ah ee udgoon iyo nadiifsan waxay u fiican tahay kicinta maskaxda, wanaajinta xasuusta iyo maskaxda, iyadoo laga caawinayo noocyo kala duwan. dhibaatooyinka marinka neefta oo ciriiri ah, murqaha oo adkaada, qabow iyo sidoo kale xoojinta beerka iyo xameetida. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa hagaajinta caafimaadka timaha iyo madaxa.
Saliida Rosemary waa mid cajiiba nadiifinta maskaxda iyo wacyiga maskaxda, iyo sidoo kale hagaajinta xasuusta.Waxay ka caawisaa madax xanuun, madax xanuun, neuralgia, daal maskaxeed iyo daal maskaxeed iyo ficil-celinta sunta ah ee saliidda rosemary waxay si gaar ah ugu habboon tahay caabuqa mindhicirka iyo shuban-biyoodka, fudaydinta xiidmaha. . Waxay kaloo ka caawisaa arteriosclerosis, wadna garaac, wareegga oo xumaada iyo xididdada dhiigga.
Waxyaabaha lagu durayo ee saliidda rosemary waxay waxtar u leeyihiin yaraynta haynta biyaha inta lagu jiro caadada, iyo sidoo kale cayil iyo cellulite.
Waxay ku fiican tahay qurxinta iyo maqaarka iyo timaha
25kg / 180kg / durbaan
Alaabta Iibinta Kulul
Baako & Shixnad
Adeeg xirmo kala duwan
1. 1-200ml / dhalo
2. 1-50kg / foosto caag ah ama / dhalada aluminium
3. 180 ama 200kg / foosto
4. Codsi macaamiisha ah
ThesilverbulkisGalvanizedIron.wehave180 / 200kgdrum, thebluebulkisplastic
1. Amarka Sample: gudaha 24Hours kadib bixinta
2.waxaa ka hooseeya 1000kg: 7 maalmood oo shaqo kadib bixinta
3.1000-5000kg: 10-15 maalmood oo shaqo kadib bixinta.
Shahaado & Adeeg
1) Waxaan ku siin karnaa qiimeeyeyaasha adeeg baakad "hal-joog", laga bilaabo cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka, dhoofinta iyo wixii la mid ah
2) Awoodda R & D ee xoogga leh ha u oggolaato tikniyoolajiyadeena heer hoggaamineed, weligood, markooda, si ay u siiso macaamiisha adeeg wanaagsan.
3) Waxaan haysanaa shahaadada ISO & SGS oo macaamiisha u ogolaaneysa inay ku qancaan oo ay ku kalsoonaadaan.
4) In ka badan 19 sano oo waayo-aragnimo dhoofineed ah, waxaan ku siin karnaa macaamiisha adeeg xirfadeed oo dheeri ah.
5) Isku qas iyo badeecooyin kala duwan oo ku jira ONE PCL, waxay kordhiyaan waxtarka shaqada ee macaamiisha.
6) Xarunteeduna tahay Shanghai, Shanghai waa mid ka mid ah dekedda ugu weyn adduunka, kuna habboon caadooyinka bixiya adeegyada saadka.
7) Xubnaha dahabiga ah ee Alibaba oo leh dammaanad deyn sare.
S1: Saliidaha Muhiimka ahi ma kuwa dabiici ah baa mise waa kuwa la isku qurxiyo?
J: Badanaa badeecadaheena waxaa si dabiici ah uga soo saara dhirta, ma jiraan wax dareeraha lagu daro iyo waxyaabo kale.Waxaad u iibsan kartaa si badbaado leh.
S2: Alaabtayadu ma si toos ah ayaa loogu isticmaali karaa maqaarka?
J: Si naxariis leh plz waa in la ogaadaa in alaabtayadu ay yihiin saliid muhiim ah oo saafi ah, waa inaad isticmaali lahayd ka dib qoondaynta saliida salka
Q3: Waa maxay xirmada alaabteennu?
J: Waxaan u haynaa baakado kala duwan saliida iyo soosaarida dhirta adag,
Guud ahaan, waxaan u adeegsannaa 25kg Fiber Drums gudaha baco balaastik ah oo gudaha ah oo loogu talagalay soosaarida dhirta adag, OD waa Φ38 × 55cm oo ah miisaan miisaankiisu yahay 3.0kg
Saliid ahaan, waxaan u adeegsanaa 50kg Drum Iron Drum oo ah 6.5kg miisaanka saafiga ah, oo leh ODΦ30 × 60cm,
iyo 180kg / 200kg. oo leh ODΦ57 × 90cm oo ah 21kg miisaanka saafiga ah.
S4: Sidee loo aqoonsadaa darajada saliida lagama maarmaanka ah ee kala duwan?
J: Badiyaa waxaa jira 3 darajo oo saliid dabiici ah oo dabiici ah,
Fasalka A waa Fasalka Pharma, waxaan u isticmaali karnaa warshadaha Caafimaadka waxaana hubaal ah in laga heli karo warshado kale.
FasalkaB waa Darajada Cuntada, waxaan u isticmaali karnaa dhadhanka cuntada, dhadhanka maalinlaha ah iwm.
FasalkaC waa Fasalka Cadar, waxaan u isticmaali karnaa dhadhanka & udugga, quruxda iyo daryeelka maqaarka.
Hore: Xalka Bogsashada HDPE Xidhmada dhalada ee saliida budada chlorophyll
Xiga: Cuntada Jumlada ah ee Cuntada Jilibka Saliida Dabiiciga ah
1.Ma saliidahan Muhiimka ahi ma dabiicibaa mise waa isku-dhafan?
Waxaan nahay soo saare, badiyaaana alaabtayada waxaa soo saara dhir sida caadiga ah, looma daro dareeraha iyo waxyaabaha kale.
Si ammaan ah waad u iibsan kartaa.
Ma wax soo saarkeena si toos ah loogu isticmaali karaa maqaarka?
Si naxariis leh ayaa loo xusay in alaabteennu ay yihiin saliid lagama maarmaan ah oo saafi ah, waa inaad isticmaali lahayd ka dib qoondaynta saliidda salka
3. Waa maxay xirmada alaabteenu?
Waxaan haynaa xirmooyin kaladuwan oo loogu talagalay saliida iyo soosaarida dhirta adag.
4. Sidee loo aqoonsadaa darajada saliida kaladuwan ee kaladuwan?
Badiyaa waxaa jira 3 darajo oo saliid muhiim ah oo dabiici ah
A waa Fasalka Pharma, waxaan u isticmaali karnaa warshadaha Caafimaadka waxaana hubaal ah in laga heli karo warshado kale.
B waa Darajada Cuntada, waxaan u isticmaali karnaa dhadhanka cuntada, dhadhanka maalinlaha ah iwm.
C waa Fasalka Cadarka, waxaan u isticmaali karnaa dhadhanka & udugga, quruxda iyo daryeelka maqaarka.
5. Sideen ku ogaan karnaa tayadaada?
Waxyaabahayagu waxay ansixiyeen tijaabooyin xirfadlayaal ah oo qaraabo ah waxayna gaareen shahaadooyin qaraabo ah, intaa waxaa sii dheer, kahor intaadan dalban, waxaan kuugu soo bandhigi karnaa muunadda sheyga si bilaash ah, ka dib markaad isticmaasho ka dib, waxaad si fiican u fahmi kartaa alaabteenna.
6.Waa maxay gaarsiintayadu?
Keyd diyaarsan, Markasta. MOQ,
7. waa maxay habka lacag bixinta?
T / T, Paypal, midowga reer galbeedka, bixinta Alibaba
Rosemary Saliida Muhiimka ah
Shiinaha alaab-bixiyaha daryeelka maqaarka alaab-qeybiyaha ...
yaree nabarka Abuurka Karootada Dabiiciga ah Saliida Muhiimka ah
Wax soo saarka Hot iibinta ee saliidda lagama maarmaanka ah iyo natura ...
saliida daaweynta timaha jeermiga jeermiga oi
Saliida Macadamia si fiican loogu talagalay duugista, way fiicantahay sk ...
abuur rummaanka isticmaalka saliida lagama maarmaanka ah ee diffuser ...
JiangXi HaiRui Dhirta Dabiiciga ah Co., Ltd.